IBeachfront Oceanview Cozy Studio kwiFront Street
Ukufutshane kwimisebenzi elungele usapho, umbindi wesixeko, & nezithuthi zikawonke-wonke. Uya kuyithanda le ndawo ngokujonga umoya ongaphambili wolwandle obekwe kumgangatho we-2. Qala iintsasa zakho ngombono wokuphuma kwelanga kunye nezibuko laseGreat Bay. Ngqina iinqanawa zokuhamba ngenqanawa zingena echwebeni phezu kwekomityi yekofu kunye ne-croissant. Ukuhamba umgama ukuya kwimbali yaseFort Amsterdam eseDivi Little Bay. Le ndawo ilungele izibini, abantu abahamba bodwa, abahambi ngezoshishino, kunye neentsapho (kunye nabantwana).
Esi sithuba sifanelekile kwabo banandipha ubuhle bendalo - ukuphuma kwelanga phezu kwentaba ngelixa iinqanawa zokuhamba ngenqanawa zingena kwizibuko lethu. Ubekwe embindini wedolophu ngokuthe ngqo kwisitalato i-Front kunye nokufikelela kwi-Boardwalk apho unokuhamba uye ezantsi kwiindawo zokutyela, ezivenkileni naselwandle.
Sifumaneka kwintloko yesitalato iFront Street imizuzu embalwa sihamba sisehla ibhodi ukuya kwiziko lokuthenga kunye neendawo zokutyela.
Thumela uHlaziyo lweNkanyamba u-Irma noMaria:
Ngelixa isiqithi siye sachatshazelwa kakhulu yiNkanyamba i-Irma udidi lwe-5+ isaqhwithi. Ukucoca kunye nokubuyiselwa kwemisebenzi yeyona nto iphambili! Ngenqanawa yokuqala yokuhamba ngenqanawa ukutyelela nge-11 kaNovemba kunye neenqwelomoya zorhwebo ukuphinda ziqalise phakathi kuka-Okthobha-ISiqithi esiLungileyo silapha ukuhlala!
Ndihlala ndifumaneka kuwe ukuba unemibuzo okanye ungathanda iingcebiso ezimbalwa. I-St.Maarten sisiqithi esihle ekulula ukuhamba ngaso xa usazi iindawo eziphambili zokutyela, ubusuku kunye neminye imisebenzi.